Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: मुलुक राजनीतिक रुपले स्थीर बनेन तर अवस्था अहिलेको भन्दा गिर्दोसमेत भएन भने पनि अबको तीनचार वर्षमा देशमा देखिने गरी परिवर्तन हुँदैछ !
मुलुक राजनीतिक रुपले स्थीर बनेन तर अवस्था अहिलेको भन्दा गिर्दोसमेत भएन भने पनि अबको तीनचार वर्षमा देशमा देखिने गरी परिवर्तन हुँदैछ !
बिजुली-पानी हाहाकार तीन वर्षमात्र !
मैले कतिपय गैरराजनीतिक मञ्चहरुमा भन्ने गरेको छु, मुलुक राजनीतिक रुपले स्थीर बनेन तर अवस्था अहिलेको भन्दा गिर्दोसमेत भएन भने पनि अबको तीनचार वर्षमा देशमा देखिने गरी परिवर्तन हुँदैछ। देश विकासको स्पष्ट संकेत देखिने छ। त्यसका लागि सरकारका निकायहरुले स्पष्ट खाका कोर्दै छन्। यसमा निजी क्षेत्रको समेत सकारात्मक र उत्साहजनक सहभागिता छ। त्यसले मुलुकको राष्ट्रि«य जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ल्याउने छ।
त्यसो भए के के कुरामा आशा लाग्दो परिवर्तन हुन्छ त?
ऊर्जा : माथिल्लो तामाकोशी
जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दछ उर्जा। नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भनेर कहलिएको छ। तर जलस्रोतमा धनी देश नेपालमा हामीले आधा दिन र आधा रात लोडसेडिङमा बिताउनु परेको छ। लोडसेडिङका कारण हामीले पर्याप्त बिजुली पाएनौं। जाडोको बेला लोडसेडिङ अनि अन्धकारमय जीवन बिताउन अवश्य कठिन छ। लोडसेडिङका कारण हामीले हाम्रो जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभावित पारयो भनेर मात्र हेरिरहेका हुन्छौं। तर त्यसको सम्बन्ध त्यसमा मात्र सिमित छैन। राष्ट्र«लाई नै गति प्रदान गर्न तगारोका रुपमा रहेको छ लोडसेडिङ। यस्तो निराशाजनक अवस्था अव कम्तिमा ४ बर्षसम्म मात्र सिमित रहनेछ। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने बलियो आधार भनेको दोलखा जिल्लामा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना नै प्रमुख हो भनेर बुझदा हुन्छ।
सन् २०१६ सम्ममा माथिल्लो तामाकोशी लगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विजुली अहिलेको तुलनामा दोव्वर हुँदैछ। अहिलको ७ सय ७२ मेगावाटबाट अवको ३ बर्षमा अर्को ७ सय मेघावाट विजुली थपिने छ। पक्कै पनि यो सकारात्मक सन्देश नै हो। अहिले आमनेपालीले अत्यधिक लोडसेडिङ खप्नु परेको छ। त्यो उत्पादनपछि लोडसेडिङमा भारी कटौती हुनेछ। त्यसपछि नेपालीको जनजीवन सामान्य बन्न जानेछ।
त्यसले आम नेपालीको मात्र नभएर औद्योगिक गतिविधिलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दै मुलुक अगाडि बढ्नु छ। औद्योगिक कलकारखाना खुल्ने छन्। सेवा मुलक उत्पादनमा वृद्धि हुने छ। कतिसम्म भने देश सिमेन्टमा चाहिँ पक्का आत्मनिर्भर हुनेछ।
यही ४ बर्षको अवधिमा अरु ठूला टूला जलविद्युत आयोजना पनि बन्न सुरु हुनेछन्। तनहुँ जिल्लामा तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सन् २०१५ भित्र सुरु हुँदैछ। १४० मेगावाटको त्यो आयोजना कुलेखानी विद्युत आयोजनापछिको दोस्रो जलासय युक्त आयोजना हो। जसले बर्षैभरी एक नासले विजुली उत्पादन गर्नेछ।
पर्याप्त विजुली उत्पादन र वितरण हुन थालेपछि हाम्रो जीवनमा एक किसिमले सहजता आउने छ। मानिसले विजुलीबाट खाना पकाउन सक्ने छन्। एलपी ग्यासको खपत घट्न्े छ। आज भारतबाट डिजेल ल्याएर उर्जाका लागि जेनेरेटरको प्रयोग बढेको छ। विजुली पर्याप्त भएपछि डिजेलको खपत स्वभाविक रुपमा घटेर जानेछ।
यथेष्ट विजुली उत्पादनले राष्ट्रि«य जीवनमा आमूल परिवर्तन हुने छ। यसैवीचमा बुढीगण्डकी ६ सय मेगावाट र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना ७ सय ५० मेघावाटका वृहत विद्युत आयोजना सुरु हुँदैछन्। यो अर्को सुखद पक्ष हो।
खानेपानी : मेलम्ची सपना पूरा
पानी आम मानिसको जीवनको अमूल्य बस्तु। तर नेपाली जनताले स्वस्थ र स्वच्छ खानेपानी खान पाएका छैनन्। घना शहरी वस्ती तथा राजधानीका हिसावले पनि काठमाडौं उपत्यका प्रमुख शहर हो नेपालको। आजका दिनमा या आसन्न सुख्खायामको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिन्छ। तत्कालका लागि कुनै विकल्प छैन। तर काठमाडौंबासीले अव धेरै होइन, ३ बर्षभित्रै पर्याप्त खानेपानी पाउने छन्। खुशीको कुरा एकादेशको कथा बन्दै गएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २०१६ भित्रै पूरा हुँदैछ। यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको भित्रको पानीको हाहाकारको अन्त्य हुने छ। काठमाडौंबासीले उच्च स्तरको स्वच्छ खानेपानी पाउने छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुनुको अर्थ के हो त ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्षौदेखि एउटा कथाका रुपमा विकसित हुन पुग्यो। कहिल्यै पूरा नहुने र महत्वकाक्षी योजना भनेर कयौं बर्ष गफको विषय बन्यो। यद्यपी आममानिसलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना कथाझैँ लाग्दछ।
तर नेपाली संवत २०७३ को शुभ उपहारका रुपमा काठमाडौंवासीले मेलम्ची खानेपानी पाउँदैछन्। यो पक्का हो की अव २०७३ सालमा मेलम्चीको सुरुङ निर्माण कार्य पूरा हुनेछ। यतिबेला एक इटालियन कम्पनीले सुरुङ र काठमाडौंको सुन्दरीजलमा भारतीय कम्पनीले पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम एक साथ अगाडी वढाइरहेका छन्।
यो आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौंबासीले पर्याप्त खानेपानी पाउने छन्। असंभव कुरा पनि संभव भयो भनेर आम नेपालीमा उत्साह बढ्ने छ। बर्षौदेखिको मेलम्ची कथा पूरा हुने छ। नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा आत्मविस्वास बढ्ने छ।
यो मेलम्चीको सुरुङ बन्पछि सिन्धुपाल्चोकको याङरी र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी प्रतिदिन काठमाडौं ल्याउन बाटो खुल्नेछ। सुरुङ त्यही प्रयोग हुनेछ। त्यसको लम्बाईमात्र वढाए पुग्छ। निर्माणाधिन सुरुङबाट प्रति दिन ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ।
वृहत खानेपानी आयोजनाको चर्चा गर्दा काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएको काभ्रे उपत्यका खानेपानी आयोजना पनि सन् २०१५ सम्ममा पूरा हुँदैछ। फुल्चोकी क्षेत्रको पानीको मुहानबाट काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना पूरा हुँदैछ। त्यो आयोजनाबाट पनौती, बनेपा र धुलीखेल क्षेत्रको शहरी तथा ग्रामीण बस्तीमा २४ घण्टामा ७२ लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ।
यस्ता अरु पनि धेरै खानेपानी आयोजना सञ्चालित हुँदैछन्। किनभने सरकारले सन् २०१७ सम्ममा आम नेपाली नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। साथै सरसफाई युक्त बसोबासको योजना समेत रहेको छ।
पर्यटन: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासको बलियो आधार हो। अनि पर्यटन विकासका लागि सडक तथा हवाई यातायात नै प्रमुख कुरा हुन। साथै राम्रा र सुविधा सम्पन्न होटल पनि पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। देशमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटामात्र छ। यसले यो भन्दा ज्यादा भार धान्नै सक्दैन। किनभने यसलाई अहिलेको भन्दा फराकिलो पार्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले छिटो भन्दा छिटो क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ।
यसैक्रममा सबैभन्दा पहिले बुद्धको जन्मस्थलकै समिप भैरहवामा एक आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने पक्कापक्की भएको छ। यो अर्को उल्लेख गर्न लायक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। हुन त हाम्रा अधिकाश राष्ट्रिय आयोजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने साल सन् २०१७ नै तोकिएको छ। यसै वर्ष भैरहवामा गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पूरा हुनेछ। अवस्य त्यसले एकातिर देशमा पर्यटन विकासमा नयाँ फड्को मार्ने छ भने अर्को तिर देशको मुहार फेर्न त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।
काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नतिको काम समेत २०१७ सम्ममा पूरा भइसक्ने छ। तर त्यतिबेलासम्ममा काठमाडौंमा जुन जुन क्षमताका जहाज आउन सक्छन्। ती सबै जहाज अवतरण हुनेगरी भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछ। त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
आज काठमाडौं आउने मध्ये १ हजार पर्यटकलाई भैरहवा लैजान सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौंदेखि भैरहवासम्मको यात्रा सहज छैन हवाई र स्थलमार्ग दुबै। भैरहवामै एक आधुनिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि कम्तिमा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी भएका देशहरु थाइलैण्ड, सिंगापुर, कोरिया, चीन लगायतका देशबाट सिधा हवाई सेवा सञ्चालन हुने छ र लुम्विनीमा पर्यटकको आवागमन वढ्ने छ। लुम्बिनीको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बढ्ने छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपालीलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि काठमाडौं आइरहनु पर्ने बर्तमान जटिल अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। काठमाडौं र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जनसंख्याको चाप घट्ने छ। काठमाडौं केन्द्रीत पर्यटन व्यवसायीहरु भैरहवालाई आफनो नयाँ थलो बनाउने छन्। भैरहवा, लुम्बिनी, पाल्पा, नवलपरासी र चितवन लगायतका स्थानमा पर्यटनको तिव्र विकास हुनेछ। साथै यससँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको समेत बृद्धि हुनेछ।
भैरहवाबाटै सिधै हिमाली दृष्यालोकन र आन्तरिक उडान सुरु हुनेछ। देशभित्रका विभिन्न विमानस्थलमा उडान थप भए ती क्षेत्रमा समेत पर्यटन विकास हुनेछ। साथै काठमाडौंदखि भैरहवासम्मको हालको सडक यातायातमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ।
बाराको निजगढमा अर्को आधुनिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी हुनेछ यसैवीचमा।
सन् २०१७ सम्ममा नेपालको पर्यटन विकासमा मुलुकको एकमात्र राष्ट्रि«य ध्वजावाहक नेपाल वायू सेवा निगमले अन्तराष्ट्रि«य स्तरमा उडानलाई मजवुद बनाउने छ। त्यसका लागि जहाजहरु थपिने छ। पर्याप्त जहाजहरु नभएका कारण आन्तरिक उडानहरु कतौटी गरिएको छ। जहाजहरु थप गरिएपछि हवाई यातायात सस्तो र सर्वसुलभ हुनेछ। त्यतिबेला हवाई यातायातलाई भरपर्दो सेवाका रुपमा विकास गरिने कुरामा म विश्वस्त छु।
एनएसीको सेवा विस्तार आजको दिनलाई हेर्दा हास्यास्पद तर्क लाग्न सक्छ। तर अवको ३ वर्षमा अवस्था त्यस्तो रहदैन। एनएसीको सेवा अवस्य विस्तार नगरी सुखै छैन। अवस्य विस्तार हुनेछ।
एनएसीको सेवा विस्तार हुनुको सकारात्मक पक्ष के हो त ?
यसबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको पर्यटन विकासमा प्रसस्त योगदान पुग्नेछ। सस्तो दरमा अन्तराष्टिय उडान सुरु हुनेछ। यसरी वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्रयाउने राष्ट्रि«य योजनालाई सार्थक तुल्याउन सहज हुनेछ। किनभने एनएसीले चीन र भारत दुबैतिर उडान थप्नेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा समेत काम गरेको अनुभवबाट म के कुरामा स्पष्ट छु भने चीन र भारत दुबै देश नेपालको पर्यटन वजार स्थायी र भरपर्दो छ।
सडक यातायात: मध्य पहाडी राजमार्ग
सडक विकासको पहिलो प्रस्थान विन्दू हो। कुनै स्थानमा सडक पुगेसँगै विकासका अन्य पूर्वाधारहरु सँगसँगै जान्छन्। हो त्यही भएर यतिबेला पूराना राजमार्ग र सडकका योजनाहरु धमाधम पूरा हुने तर्फ उन्मुख छ।
सन् २०१७ सालसम्ममा मध्य पहाडी राजमार्ग पनि पूरा हुनेछ। त्यतिबेला पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै पहाडै पहाड मोटर यात्रा पूरा गर्न सकिने छ। यसपछि हालको तराई झर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। राष्ट्रि«य गौरवको यो आयोजना पूर्वतिर कम्तिमा अवको तीन बर्ष भित्र पूरै छिचोलिने छ। पश्चिमतिर पनि धमाधम निर्माणको काम भइरहेको छ। काभ्रेको पाँचखालबाट पाँचथरसम्म पिच बाटो बन्ने छ।
मध्य पहाडी राजमार्गसँग जोडिएको अर्को महत्वकाक्षी योजना जोडिएको छ। यस राजमार्गमा १० वटा आधुनिक शहर निर्माण हुनेछन्। त्यसमा पर्ने शहरहरु हुन, पश्चिमबाट पूर्व क्रमसः बैतडीको पाटन, अछामको साफेवगर, दैलेखको राकम कर्णाली, रुकुमको चौरझारी, बाग्लुङको वुर्तिवाङ, तनहुँको डुम्रे, धार्दिङको गल्छी, सिन्धुलीको खुर्कोट, तेह्रथुमको बसन्तपुर र पाँचथरको फिदिम। यी शहरमा कम्तिमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जनसंख्या अटाउने गरी आधुनिक शहरको संरचना निर्माण गरिनेछ। यसको लागि पूर्वाधार विकासको काम सुरु भइसकेको छ। भलै यो महत्वाकाक्षी योजना पूरा हुन अरु केही बर्ष लाग्ने छ। मध्यपहाडी राजमार्ग वनेपछि योजनावद्ध शहर पनि बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो १० आधुनिक शहर बनाउने योजना बनेको हो।
राष्ट्रले देशका ७५ जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यतिञ्जेल अर्थात सन् २०१७ सम्ममा देशका ७४ जिल्लामा मोटर बाटो पुग्नेछ। एउटा हुम्ला जिल्लालाई जोड्न भने अलिक कठिन छ। अव मोटर पुग्ने ७४ औं जिल्ला डोल्पा हुनेछ। कर्णालीको अति विकट जिल्ला मुगु र हिमाल पारीको जिल्ला मनाङलाई जोड्ने सडकको समेत आगामी ३ वर्षमा स्तर उन्नती गरिनेछ।
अत्तरिया धनगढी, कोहलपुर नेपालगञ्ज, वुटवल भैरहवा, पतलैया वीरगञ्ज, इटहरी विराटनगर सडक ४ लेनमा विकास गर्नाले तराईका शहर विस्तार र आधुनिकरणमा मनग्गे टेवा पुरयाउने छ। यी सडकमा दुई लेन जाने र दुई लेन आउने गरी सडक विस्तारित हुनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने सडक अत्यधिक फराकिलो पारिनेछ। सँगै वृक्षरोपण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी वढाइने छ। काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा फ्लाई ओभर र सडक चौडा बनाउने काम हुनेछ। समग्रमा सडकमा देखिने गरी सुधार आउने छ।
काठमाडौं सभ्यता: वाग्मती नदी संरक्षण
यतिबेला वाग्मती सुधार आयोजनाले द्रुत रुप लिएको छ सन् २०१७ सम्ममा वाग्मती नदी सफा बनाउन। वाग्मती नदी संरक्षणमा लगानी भइरहेको छ। अव ३ देखि ४ वर्षमै ढलमुक्त, पानीयुक्त र हरियाली युक्त बाग्मती हुनेछ। शिवपुरी क्षेत्रमा बाँध बनाएर वर्खाको पानी जमाएर हिउँदमा छाडिनेछ। जसका कारण सुख्खा याममा पनि वाग्मतीमा पानी वग्नेछ। साथै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पनि कुनै न कुनै रुपमा वाग्मतीमै जान्छ। त्यो बेला सुख्खा र मृत बाग्मती हुने छैन, जाग्नेछ।
किनभने बाग्मती हामी सबैको साझा चासोको विषय हो। वाग्मतीप्रति आममानिसको निरासा छ। अव त्यो निरासाको अन्त्य भइ बाग्मती नदी, बाग्मती सभ्यता र संस्कृतिको अवस्य संरक्षण हुनेछ।
उल्लेखित विकासका संरचनाहरु निर्माण पूरा भएपछि मुलुकमा देखिने गरी र आमजनताको जीवनमा सुधार आउने गरी परिवर्तन हुनेछ। अवस्य नै अहिलेको राजनीतिले जनअपेक्षा वढाई दिएको छ। आममानिसलाई महत्वकाक्षी बनाएको छ। त्यो कसरी पनि स्पष्ट हुन्छ भने गत संविधानसभाको चुनाबमा संविधान माग्ने भन्दा अवस्य पनि सडक, विजुली, खानेपानी, स्कूल या स्वास्थ्य चौकी माग्नेहरुकै संख्या वढि देखियो। हो यो कारणले पनि ३।४ वर्षमा देखिने गरी मुलुकको मुहारमा उल्लेख्य सुधार आउनै पर्छ र आउने छ भन्ने मेरो विश्वास हो।
यी माथिका आयोजनाहरु सुरु भइ सकेका छन्। अहिले सुरु गरेका कामले सकारात्मक परिणाम ल्याउने छ।
म शिक्षा सचिव भएका वखत साक्षर अभियान नेपाल सुरु भएको थियो। जुन अहिले जारी छ। २०१५ सालसम्ममा पूरा देश साक्षर हुनेछ। यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो नेपालको सन्दर्भमा।
ती त सन् २०१७ सम्ममा पूरा हुने काम भए। त्यसबेला सम्ममा सुरु हुने अन्य केही राष्ट्रि«य महत्वका आयोजनाहरु पनि छन्। काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन सिञ्चाई आयोजना, बाँके सिक्टा सिञ्चाई आयोजना, बारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल जस्ता आयोजना ठूला आयोजना सुरु हुँदैछन्। यसले पनि राष्ट्रि«य जीवनलाई थप उर्जा प्रदान गर्ने छ।
नेपालमा म भन्दा भिन्न दृष्टिकोण राख्ने विद्वान र योजना विदहरु पनि हुनुहुन्छ। देशलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर योजना बनाउनेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर म सरकारी कर्मचारी भएकाले मात्र देशमा केही सकारात्मक काम पनि हुँदैछ भनेको होइन। तर म साच्चिकै देश धेरै सकारात्मक प्रगतितिर लम्किरहेको देख्दछु।
(सहरी विकासविज्ञ तथा योजनाविद थापा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन्।)